Park Jungfrau, mistery taloha ao amin'ny Interlaken | Vaovao momba ny dia
Park Jungfrau, mistery taloha ao Interlaken
Mariela Carril | | Soisa, Tsangatsangana
Ankehitriny ny fitsidihan'ny vahiny tamin'ny andro taloha hypothèse somary azo inoana io ary tsy ny lohahevitra foronina foronina fotsiny. Ankoatra ny seho fahitalavitra somary manaitra, raha manokatra ny saron'ny fialamboly ny olona iray dia mahita zava-miafina tena izy sy famantarana tena mahaliana.
Fony mbola zatovo ny raiko dia nampindraminy ahy ny boky rehetra Erich Von Däniken, Soisa iray izay nanao ny asan'ny mpisava lalana tamin'ny taona 70 tamin'ny firesahana ireo olana ireo ary nametraka fanontaniana tsy mahazo aina tamin'ny siansa. Tsy nisy fahitalavitra tariby sy tsy misy Internet, navoaka nanerana an'izao tontolo izao ny bokiny ary toa nanam-bola be izy. Tamin'ny fananany sy ny fahatongavan'ny taonjato vaovao, dia nanambola izy: nanangana Jungfrau Park, zaridaina fialamboly izay manodidina ny zava-miafina lehibe manerantany.
Jungfrau Park, nofinofy tanteraka
ankehitriny Von Däniken dia 81 taona ary, eo amin'ny sehatry ny teôlôjiana mpanamory sambondanitra taloha, dia toa an'io Master. Ny fehin-keviny momba ny fitsidihan'ny vahiny tamin'ny andro taloha sy ny fiantraikany teo amin'ny fiainan'ny olombelona dia namaky tanteraka ny tany sy ny bokiny voalohany, nanomboka tamin'ny 1968, ¿Kalesin'andriamanitra?, dia bestseller izay ny vola azony dia nahafahany nandoa trosa sy fitoriana noho ny fitantanana tsy ara-dalàna ny volan'ny trano fandraisam-bahiny niasany.
Nadika tamin'ny fiteny 32 ny bokiny ary maherin'ny 63 tapitrisa kopia no namidy. Namafy ny fisalasalana, ny fientanentanana ary ny fahalianana tamin'ny eritreritra an'arivony sy an'arivony maro. Hany ka raha teo aloha dia fady sy tsy lohahevitra tena matotra, androany dia misy ora sy ora fandaharana natokana ho an'ny teôria ao amin'ny fantsona toa ny History, Discovery na NatGeo. Incuso Ridley Scott, talen'ny Prometheus (horonantsary prequel ho an'ny Alien), dia nilaza fa nahazo aingam-panahy tamin'ny heviny izy.
Ny marina dia teo anelanelan'ny faran'ny taonjato lasa sy ny fiandohan'ity iray ity, ny hevitra hananganana zaridaina fialamboly izay niresaka ireo lohahevitra ireo dia nanjary matanjaka tao aminy: zaridaina iray momba ny zava-miafina lehibe an'ny zanak'olombelona. Apetraho izy Valan-javaboary Jungfrau ary nanangana azy tao Interlaken, tanàna Suisse. Amin'ny ankapobeny dia zaridaina mizara ho faritra manokana fito misy pavilion afovoany amin'ny endrika habe 41 metatra ny haavony, avy any amin'ny toerana avo indrindra anananao no mahita ny tsara indrindra amin'ilay sarotra.
Todo ny valan-javaboary dia natsangana taorian'ny hevitr'i Von Däniken, ny heviny momba ny fomba nitondran'ny vahiny fiainana manan-tsaina teto an-tany ary nanampy azy hivoatra. Ireo no anaran'ireo sehatra samihafa: Nazca, Vato Megalithic, Maya, Oriente, Vimana ary Desafío.
Ny sehatry ny Nazca dia mifantoka amin'ny tsipika miafina sy mahatalanjona peroviana izay tsy hita afa-tsy amin'ny hatsarany rehetra avy any ambony. Ny sehatry ny Megalithic Stones dia misy ifandraisany amin'i Stonehenge, faribolana vato goavambe any Salisbury, atsimo andrefan'i Angletera, i Maya dia mifantoka amin'ny angano an'io sivilizasiôna amerikana io, ny kalandrie sarotra misy azy, ary mizara roa ny atsinanana: milaza ny iray anay momba ny tionelina ambanin'ny tany ambanin'ny Sahara izay nahitana sarcophagi misy taolana biby mifangaro ary misy iray hafa mifandraika amin'ny piramidan'i Egypt.
Vimana dia anaran'ny sambo hafahafa avy amin'ny angano indianina, milina manidina izay andehanan'ireo andriamanitra izay nanandrana naka tahaka ireo injeniera maoderina mihitsy aza ny endriny. nofinofy na zava-misy, ny hevitra dia ny manontany tena momba ireo olana ireo, mba hamaly valiny, fikirakiran-kevitra samihafa fa tsy mamorona amin'ny tendrony izay voalazan'ny arkeolojia ortodoksa.
Finalmente misy sehatra iray hafa antsoina hoe Nautilus. Izy io dia simulateur anaty rano izay mikendry ny hampiharihary ireo fananganana mahafinaritra na dia rendrika manerana an'izao tontolo izao aza izy ireo. Amin'ireto sehatra ireto dia ampiana cafeteria sy trano fisakafoanana. Ny marina dia nakatona indray mandeha ny valan-javaboary tamin'ny Novambra 2006 ho an'ny olana ara-bola fa nanomboka ny taona 2009 dia nanomboka nisokatra indray izy tamin'ny vanin-taona fahavaratra.
Rehefa mandeha ny fotoana dia nasiana fisarihana samihafa ary androany dia misy zaridaina ivelany antsoina hoe Game & Fun miaraka amina trampolisy Bungee, sisin-dàlana an-tongotra sy kianja filalaovana. Ny tranokala dia azo hofaina amin'ny hetsika, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, sy ny toy izany. Andao lazaina fa toerana mila fitsidihana matetika mba hahafahana misokatra hatrany, ka amin'ireo zava-miafina razana dia nanampy fahafinaretana mahazatra kokoa izy io mba hisarihana ny olon-dehibe sy ny ankizy na ny ray aman-dreny te hahafanta-javatra miaraka amin'ny zanaka hampiala voly.
Amin'ity fahavaratra 2016 ity Nisokatra tamin'ny 1 Mey ny Jungfrau Park ary hikatona ny 23 Oktobra. Misokatra isan'andro eo anelanelan'ny 11 maraina sy ny 6 tolakandro. Eto ianao manana bebe kokoa fampahafantarana azo tsidihina amin'ny fitsidihana ny Jungfrau Park, von Von Däniken:
Vidiny: CHF 40.00 isaky ny olon-dehibe ary CHF 22.oo isaky ny zaza. Mandoa vola 28 ny mpianatra amin'ny fanomezana karatra manaporofo izany. Afaka mandoa Euro ianao, na dia Franc Swiss aza no hatolotra. Ny tapakila dia ahitana ny fampisehoana multimedia, ny fandehanana amin'ny Fun Shuttle sy ny sambo mpisitrika Nautilus ary ny fidirana amin'ny kianja filalaovana. Ankoatr'izay dia voampanga ihany koa ny mitaingina segway (CHF 10) sy ny Bungee Trampolin. Ny fianakaviana misy efatra dia manana fihenam-bidy 20% ary raha tsingerintaona nahaterahanao dia afaka ianao.
Misy tapakila mitambatra izay ahitana ny valan-javaboary sy ny fitsidihana ny St. Beatus Caves miaraka amin'ny fitsangatsanganana adiny iray mandritra ny adiny iray ho an'ny CHF 55.00.
Ahoana no ahatongavana any: azonao atao ny mitondra lamasinina mankany amin'ny gara Interlaken Ost ary avy eo dia makà bus 103 mankany amin'ny fijanonan'ny valan-javaboary. Azonao atao ihany koa ny mandray taxi na mandeha an-tongotra avy eo amin'ny gara, izay tsy lavitra eo koa.
Raha liana mihaino an'i Erich Von Dániken ianao dia afaka manao izany satria manome lahateny indray mandeha isam-bolana izy eo anelanelan'ny Mey sy Oktobra. Mazava ho azy fa tokony hitsidika ny tranokalan'ny valan-javaboary ianao hahalalana ny daty sy ora.
Raha mitady fialan-tsasatra hitsidihana an'i Soisa ianao, ankoatry ny sary an-tsary ny alpine sy ny sôkôlany, angamba ny vahiny no andriamby anao. Ary ahoana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Soisa » Park Jungfrau, mistery taloha ao Interlaken
Jereo i Ibiza any ankoatry ny fety
Toerana romantika hitsidihana any Italia